Cheshire Cat ari slots have 5 hunoparara pamwe 40 paylines. Akakurumbira nganonyorwa Alice muna inoshamisa ndiyo dingindira iri slots. The setup of slots isango uye Shandurwa ndiyo achibatsira mumwe. The Graphics inongova wakanaka uye vazhinji bhonasi mamiriro chipo ichi chinoshamisa mashiripiti uchinzvera kuti mutambo kunakidza. mutambo uyu rinogonawo kuridzwa runhare Casino cheap car insurance.
Five Simple Paylines iyi nyore runhare Casino cheap car insurance
The slots ane vachitamba siyana kuti dzinosiyana 40p kusvikira £ 400 paminiti kuruka. Zviratidzo dzinowanikwa pamusoro Gwenzi vanosanganisira Alice, yaMarch Hare, nomupedzachose uye Cheshire Cat uyewo pamwe nokutamba makadhi- J, K, A uye Q, keke zvidimbu, uye mashiripiti potions.
The slots anopa 12.5 nguva padanda kana iwe nenyika 5 zviratidzo mumwe chete payline. The Super ukapisa murwi dzinoti chinhu chinowanika umo vatambi vanogona chaizvoizvo kubatsirwa chaizvo. In aya, mumwe chiratidzo chichapiwa randomly vakasarudzwa kuitira kurichinja kuva nakisa ukapisa murwi chiratidzo ose kuruka.
Pane bhonasi kuchiitwa ainzi Free Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi Feature iyo chinozadzwa akaparirwa kana zvitatu vhiri bhonasi zviratidzo kunyika padenga Gwenzi. 3 wavo Award ichakusunungurai Muruoko rwake anobata chirukiso shanu, 4 wavo Award iwe gumi vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso uyewo gumi nguva yose rokutambudzikira. Kana kuti hazvina rombo zvakakwana kuti 5 wavo, iwe uchava paakavapa maviri akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso pamwe mari mubayiro unokosha 50 nguva yose bheji.
Asati chikamu ichi negandanga, pane Wheel kuchiitwa riri vakatamba pamberi pakutanga vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso izvo mibayiro remake pamusoro Gwenzi kuti vakasarudzwa randomly. Munokwanisa kuwana 4 mhuka Gwenzi kuti anogona kuti hazvina zvikuru kubhadharwa.
Pane bhonasi Ivimbiso chinhu kuti kunovimbisa risingamboshandisi zvisamumirira hwakakodzera 10 nguva Danda. Kana iwe kuhwina zvishoma, ari takunda achaita kuti zvikamu kumusoro. The kiyi kuhwina guru ndiko kuchengeta ziso pamusoro Gwenzi mhuka iri Free Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi Feature.
With makakava kubvira yakaderera kusvika svikiro, game slots anogona kuridzwa mhiri zvose Namano kubva Mobile, hwendefa uye Desktop namano. tsime, ari runhare Casino cheap car insurance dzinewo mutambo uyu. Vakanaka nyore katuni magadzirirwo anoshandira zvakanaka vatambi apo munhu akanaka orchestral njanji unoitawo necheseri. Yakarova Gwenzi iri slots nhasi pachayo iri runhare Casino cheap car insurance kana zvimwe mano zvinowanikwa uye Cheshire Cat chingazvidzisa anofara zvinoshamisa kuti imi.